AKA AKPARALA OTU NWOKE DENMAK GBURU NWUNYE YA NA NWAYA NWANYỊ NA LEGỌS – hoo!haa!!
AKA AKPARALA OTU NWOKE DENMAK GBURU NWUNYE YA NA NWAYA NWANYỊ NA LEGỌS
Na Yaba, dị na Legọs, ka ulọ ikpe majistrti nọrọ nye ikikere ka-akpọchie otu nwoke Denmak aha ya bụ Peter Nielsen maka na-ana-ama ya ime na-ogburu nwunye ya bụ Zainab nakwa nwa ha dị afọ atọ na ọkara, nke aha ya bụ Petra.
Onye ọka-ikpe bụ ‘Chief Magistrate’ Kikelomo Ayeye nyere ikikere ka-akpọchie nwokea dị afọ iri ise na atọ na ụlọ mkpọrọ di n’ikoyi. Ọbụ ndi uwe ojii yọrọ ụlọ ikpea ka-akpọchie nwokea.
Akpụtara nwa-amadịa bụ Nielsen n’ụlọ ikpe maka ịda ụzọ iwu abụọ metutara igbu ọchụ.
Ejiri asụsụ bekee gụpụtara nwokea iwu ndi ahụ ji ya dika esiri nye ya akara B/87/2018
Iwua kwuru na nwokea bụ Nielsen, nọrọ na abalịṅ ise nke ọnwa anọ n’afọa, n’ime ụlọ akara ya bụ Block 4, Flat 17, Bella Vista Tower dị na Banana Island Ikoyi Legọs, were iwe n’ọnụma tigbue nwunye ya dị afọ iri atọ na asaa. Ọzọkwa, na nwokea nọrọ n’otu ebe ahụ tigbue nwa ya nwanyị bụ Petra nke dị afọ atọ na ọkara.
Onye uwe ojii gụpụtara iwu ndia nwokea dara bụ Effiong Asuquọ bụ onye ji ọkwa Chief Supdrintendant na ọrụ uwe ojii. Onye uwe ojiia siri na ntaramafụfụ iwu nwokea dara dị n’iwu megidere arụrụmala na steeti Legọs, na mpaghara nke naarị abụọ na iri abụọ na atọ, nke eweputara n’afọ puku abụọ na iri na ise.
Asuquo nọrọ n’ibe akwụkwọ atọ odere, nke nwere ihe ntụdo aka iri na ise, yọọ ka akpọchie nwokea bụ Nielsen.
Ọ siri na-enwere ihe akaebe enweghị mgbagha ma bukwaa ibu, bụ ihe gosiri na nwokea bụ Nielsen jiri aka ike tigbue nwunye ya nakwa nwa ha nwanyị. Ọ sịkwara na nchọputa emere gosiri na ihe ejiri mara nwokea bụ iti nwunye ya ihe ka-ana-eti akpa aja mgbe niile.
Ọ sịrị n’ime agba nkea, na esemokwu dapụtara n’etiti nwokea na nwunye ya n’ime ụlọ ha n’ihe dịka elekete atọ nke ime ndeeri abalị. O kwuru na ahụchatara Nielsen mgbe ona-akụ nwunye ya isi na mgbo aja ụlọ ha bụ ebe ọ nọrọ kụgbue nwanyịa. Ọ sịrị na ndị akaebe nkea bụ ụmụ nne nwunye ya bụ Mimi dị afọ iri na otu nakwa Faith dị afọ iri na atọ bụkwa ndi so ha biri.
O kwuru na mgbe nkea mechara, na Nielsen kpụrụ ozu nwunye ya na nwa ya nwanyị kpụbaa n’usekwu ha, bụ ebe ọ mụrụ ọkụ munye n’ekwu bekee ka-ewere chee na ọ bụ anwụrụ ọkụ kogburu ha.
Ebe ọbụ na iwu nwokea dara bụ nke riri isi mmadụ, ekwuru na nwokea ga-anọ na ụlọ mkpọrọ rue mgbe aga-akpụga ya n’ụlọ ikpe ukwu bụ ebe aga-anọ kpee ya ikpe ma nye ya ntaramafụfụ kwesiri arụ o mere.
Onye Chief majistreti bụ Ayeye sịrị na ihe ndi uwe ojii kwuru bụ eziokwu, ma nye ikikere ka-akpọchie nwokea.
Ebugharịrị okwu gbasara nwokea rue abalị asatọ n’ọnwa na-abịa abịa bụ Ọnwa ise n’afọa.
Previous Post: ỌGWỤGWỤ OGE: ONYE ISI ỤKA AMACHIELA ỤMỤ NWANYỊ IYI UWE ARAA NA ỌBANTE BỊA ỤKA
Next Post: ARỤ! ANWUCHIELA OTU NWOKE N’ELU ADA YA NWANYỊ